Maxaa lagudboon Uhuru Kenyata iyo Railla | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Maxaa lagudboon Uhuru Kenyata iyo Railla
Maxaa lagudboon Uhuru Kenyata iyo Railla
Muqdisho(SONNA) Wixii ka dambeeyey Go’aankii Maxkamadda Sare ee Kenya ay waxba kama jiraanka kaga soo qaadday natiijada doorashadii madaxtinimada ee uu ku guuleystay Uhurru Kenyata, waxaa soconayay olole hor leh oo ay wadaan dhinacyadii ku loolamayay talada dalkasi, waa xisbiga Talada Haaya iyo kan Mucaaradkaasi Kenya.
Hogaamiyaha mucaaradka Kenya Railla Odinge oo u meel martay dacwadiisa ka dhanka ahayd natiijadii doorashada, ayaa haatan dib ugu laabtay ololihiisa ku aadan sidii ay dib isugu soo abaabuli lahaayeen, si ay uga miro dhaliyaan hadafkoodi ku aadan in ay qabtaan hogaanka dalka.
Mr Raila Odinga ayaa taageerayaashiisa kula hadlay xaafada Mathare ee magaalada Nairoobi, laba maalmood ka dib markii la shaaciyay natiijada doorashada, waxayna isha lagu haayaa talaabada tan xigta ee uu qaadidoono.
Dhanka kale Madaxweyne Uhuuru Kenyata oo siweyn u dhaliilay go’aanka maxakamadda, balse sheegay in uu ixtiraamayo nidaamka dalka ayaa wada qorshe ku aadan sidii mar kale ay liban uga gaari lahaayeen, doorashada markale dib la iskugu laabanayo, taageerayaashiisa ayaa waxaa uu ku booriyaay in ay muujiyaan degnaansho, isagoo u rajeeyey guul markale.
Sanadkii 2007 dalka Kenya waxaa ka dhacay qalalaaso siyaasadeed oo sababay dhimashada 1000 kun qof, kadib markii uu muran xoogan ka dhashey qaabka ay u dhacday doorashadaasi.
Koofi Annan Xog-Hayihii guud ee QM ee hore ayaa waqtigaasi ku guuleystay in uu ka qeyb qaato xal laga garay dhibaatooyinkaasi, balse dadka odoroosa siyaasadda dalkaasi, ayaa muujinaya shaki iyo tuhuno ku aadan qalalaaso hor leh oo dhici kara, inkastoo uu amaanka uu yahay mid siweyn loo adkeeyey.
Previous articleMaxaa sababay dabkii xalay ka kacay Suuq-Bacaad faah faahin ?
Next articleFaahFaahin Ku saabsan Dabkii Xalay ka kacay Suuqa Bacaad.